နာဇီဂျာမနီ - ဝီကီပီးဒီးယား
၁၉၃၃ – ၁၉၄၅ →
German Reich[မှတ်စု ၁]
အစိုးရစနစ် Unitary Nazi one-party fascist state underatotalitarian dictatorship
- 1933–1934 Paul von Hindenburg[မှတ်စု ၂]
- 1934–1945 ဟစ်တလာ[မှတ်စု ၃]
- 1945 Karl Dönitz[မှတ်စု ၂]
- 1933–1945 Adolf Hitler
- 1945 (1 day) Joseph Goebbels
- May 1945 Lutz von Krosigk
- အထက်လွှတ်တော် Reichsrat (dissolved 1934)
ခေတ်ကာလ Interwar • World War II
- အာဏာသိမ်း ၁၉၃၃
- Enabling Act 23 March 1933
- Anschluss 12 March 1938
- World War II 1 September 1939
- Death of Hitler 30 April 1945
- လက်နက်ချ 8 May 1945
- Final dissolution ၁၉၄၅
- 1939 [မှတ်စု ၄] ၆၃၃,၇၈၆ km²
- 1940[မှတ်စု ၁] ၈၂၃,၅၀၅ km²
- 1939 est. ၇၉,၃၇၅,၂၈၁ ဦး
- 1940[မှတ်စု ၁] est. ၁၀၉၅၁၈၁၈၃ ဦး
လူဦးရေ ထူထပ်မှု ဖော်ပြချက် အမှား - နားမလည်သော ပုဒ်ဖြတ် စာလုံး ","။ ဦး/km²
ငွေကြေး Reichsmark (ℛℳ)
၁၉၁၉ တွင် ဟစ်တလာသည် နာဇီပါတီ ကိုစတင်တည်ထောင်သည်။ နာဇီ ဟူသောအမည်မှာ အမျိုးသားဆိုရှယ်လစ်ကို ဂျာမန်ဘာသာဖြင့် အတိုချုံးခေါ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ နာဇီဝါဒကို ဟစ်တလာ ရေးထားသော မိုင့်ကမ့် ခေါ် ကျွန်ုပ်၏ စွန့်စားမှု အမည်ရှိသည့် စာအုပ်တွင် အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် မူဆိုလီနီ၏ ဖက်ဆစ်ပုံစံအတိုင်း နာဇီကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ Including the Protectorate of Bohemia and Moravia and the General Government
↑ ၂.၀ ၂.၁ as သမ္မတ
↑ as Führer und Reichskanzler
↑ In 1939, before Germany acquired control of the last two regions which had been in its control before the Versailles Treaty—Alsace-Lorraine, Danzig and the Polish Corridor—its area was ၆၃၃,၇၈၆ စတုရန်း ကီလိုမီတာ (၂၄၄,၇၀၆ စတုရန်းမိုင်). See Statistisches Jahrbuch 2006.
↑ Ericksen & Heschel 1999, p. 10.
↑ Soldaten-Atlas 1941, p. 8.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=နာဇီဂျာမနီ&oldid=704649" မှ ရယူရန်
၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၁:၄၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၁:၄၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။